နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve ထုတ်ကုန်များ)
Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သော solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: ဘွိုင်လာများအတွက်အနိမ့်အပူချိန် solenoid Valve , Air ကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက် 1 Solenoid Valve , Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve
Pulse solenoid အဆို့ရှင်ကိုလည်း diaphragm valve လို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းသည်ဖုန်အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများ၏ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်မှုတ်စနစ်တွင်ဖိထားသည့်လေထု၏ "switch" ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုတူရိယာ၏ output...
ညာဘက်ထောင့်လေစီးထိန်းချုပ်မှု solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: လျှပ်စစ်သံလိုက် Pulse ထိုး Valve , မြှေး Electromagnetic Pulse Valve , Separator မြှေး Valve
နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.1 ~ 0.8MPa (၀.၂ မှ ၀.၆ မီလီမီတာဖိအားသုံးရန်အကြံပြုသည်) ကာကွယ်ရေးတန်း IP65 ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -10 C ~ 50 C ဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ်အလတ်စား ရေနှင့်ရေကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အပူချိန် ၅၅ စင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ရှိသည်။ 5...
solenoid အဆို့ရှင်သည်စုပ်ယူသော 220V 24V တန်ဖိုးနည်းဖုန်မှုန့်
tag ကို: 1 လက်မ Pulse Solenoid Valve , Rectangular မြှေးအမျိုးအစား Gas Gas Solenoid Valve , အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ငွေ့ solenoid Valve
Pulse solenoid အဆို့ရှင်သည် pulse အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူတစ် ဦး ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ duster blowout tube ၏မျက်နှာပြင်တွင်တပ်ဆင်ထားသောလေထု၏စီးဆင်းမှု switch သည် Pulse Injection Control Instrument...
သော့ခတ်ခွံမာသီးလေထု solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: ၂ လက်မအိတ်အမျိုးအစား Solenoid Valve , အနိမ့်ဖိအားညာဘက်ထောင့် solenoid Valve , မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြှေး Solenoid Valve
1 လက်မ solenoid အဆို့ရှင် 220V ဆက်သွယ်ရေး
tag ကို: Air Flow Control Solenoid Valve 24V , လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve , ညာဘက် Angle Air ကို Solenoid Valve
electromagnetic pulse အဆို့ရှင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို: အလုပ်ဖိအား: 0.2-0.6MPa အလုပ်လုပ်အလတ်စား: သန့်ရှင်းသောလေထု အလုပ်လုပ်ဗို့အား: DC24V, AC220V အလုပ်လုပ်နေသောလက်ရှိ - 800mA / 60mA ပတ်ဝန်းကျင်: အပူချိန် -10 ဒီဂရီမှ 65 ဒီဂရီ...
tag ကို: Air ကို Compressor3လက်မ solenoid Valve , ဖုန် filter ကို Pulse Valve , solenoid Valve အဆုတ်အမြှေး Valve
ညာဘက်ထောင့် solenoid solenoid မြှေးအဆို့ရှင် 24V
tag ကို: ဖုန်ဖယ်ရှားရေးများအတွက် Pulse Valve , ဘိလပ်မြေဖုန်ဖယ်ရှားရေး Pulse Valve , စက်မှုအိတ်အမျိုးအစား Pulse Valve
ဇာတ်စင်ပျက်ကွက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းသုံးပြီးဘုံပြproblemနာများ၏သုံးသပ်ခြင်း ပပျောက်ရေးနည်းလမ်း Installation နှင့် debugging အဆို့ရှင်အားလုံးကိုမဖွင့်နိုင်သော်လည်းရှေ့ပြေးအစိတ်အပိုင်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည် ဓာတ်ငွေ့အထုပ်၏ဖိအားများလွန်းသည်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ...
ဟိုက်ဒရောလစ် solenoid အဆို့ရှင် 5V, DC
tag ကို: လူမီနီယမ်အလွိုင်း Solenoid Valve 24 Volt , Air ကိုလျှပ်စစ်သံလိုက်မြှေး Pulse Valve , ညာဘက်ထောင့် Solenoid Valve 24V
စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု: 1, ပွင့်လင်းဗို့အားစမ်းသပ်မှု electromagnetic pulse အဆို့ရှင်၏လေဝင်ပေါက်ဖိအားသည်သန့်ရှင်းသောလေ၏ဖိအားနှင့်ဆက်စပ်သည်။ nominal voltage ၏ ၈၅% သည် solenoid အဆို့ရှင်တွင်ပါဝင်သည်။ ၀.၀၃...
DC က 24V pneumatic ပေါက်ကွဲမှု - ကာကွယ်နိုင်သောသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
tag ကို: မြင့်မားသော Voltage AC လေကြောင်း Pulse Valve , ဟိုက်ဒရောလစ် Solenoid Valve 5V DC , anticorrosive မြှေးအမျိုးအစား Solenoid Valve
စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်: က) ပတ်ဝန်းကျင်လေထု၏ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆသည် ၈၅% ထက်မပိုပါ။ ပတ် ၀ န်းကျင်လေထုထဲ၌အငွေ့ပျံနိုင်သောအလတ်စား၊ ဂ) ဓာတ်ငွေ့အရင်းအမြစ်အလတ်စား၏အပူချိန် 1 ဒီဂရီမှ 50 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအသွင်အပြင်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။...
မြှေးအမြှေးပါးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: IP68 ဓာတ်ငွေ့မြှေးအမျိုးအစား Solenoid Valve , Right Pulse Air ကို 24V Solenoid Valve , မြှေးအမြှေးပါး Solenoid Air Valve
နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ: 1. ထုတ်ကုန်၏အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.1MPa ~ 0.7MPa ဖြစ်ပြီး, အလတ်စား degreasing နှင့်ရေကုသမှုပြီးနောက်လေထုဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်၏အမည်ခံလေထုဖိအားပြည်နယ်အောက်မှာ 2. , solenoid အဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်ဗို့အား rated ဗို့အား၏ 85%...
စက်မှု DMF T က solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: လူမီနီယမ် 1 / 2in Solenoid Valve , ချေးခံနိုင်ရည်လျှပ်စစ်သံလိုက် Pulse Valve , Pulse Solenoid Valve 220V ဆက်သွယ်ရေး
Installation နည်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးခြင်းရှိ / မရှိစစ်ဆေးခြင်း။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွင်းရှိလေ ၀ င်လေထွက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ တပ်ဆင်သည့်အခါဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှု၏ညှနျကွားနှငျ့ nozzle...
လျှပ်စစ်သံလိုက် pneumatic solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: Pulsed Jet လျှပ်စစ်သံလိုက် Pneumatic Valve , ဖုန်ဖယ်ရှားရေးများအတွက်လျှပ်စစ်သံလိုက် Pneumatic Valve , Rectangular Pulse ဂျက်အမြှေး Valve
လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် electromagnetic pulse အဆို့ရှင်သည် electromagnetic သို့မဟုတ် pneumatic pilot valves များဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပြီး pulse diaphragm အဆို့ရှင်ကိုချက်ချင်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အကျဉ်းချုပ် - Electromagnetic pulse...
သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်၏စံ
tag ကို: ပလပ်စတစ် Solenoid Valve , ကြေးနီခန္ဓာကိုယ် solenoid Valve , Pulse Solenoid Valve ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
အဆိုပါ solenoid အဆို့ရှင်အရည်၏ဥတုမှသာညီမျှသည်။ သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်သည်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ ဥပစာတစ်ခုပြုလုပ်ရန် solenoid အဆို့ရှင်နှင့်သွေးခုန်နှုန်းတို့ကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေသည်။ အဆိုပါ solenoid...
မြင့်မားသောဖိအား solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: High pressure Solenoid Valve ၏စျေးနှုန်း , မြင့်မားသောဖိအား Solenoid Valve အမျိုးအစား , ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော Solenoid Valve ၏စျေးနှုန်း
သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်၏အလုပ်လုပ်လိုအပ်ချက်များ: အလုပ်လုပ်ဖိအား: Z ကိုအမျိုးအစားအဆို့ရှင်: 0.4 ~ 0.6Mpa Y အဆို့ရှင်: 0.2 ~ 0.6Mpa ZM အမျိုးအစားအဆို့ရှင်: 0.4 ~ 0.6Mpa ။ လေအရင်းအမြစ်အလယ်အလတ် - အပူချိန် <55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, deoiling, ရေကုသမှု,...
tag ကို: Pulse Valve ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , Pulse Valve စျေးနှုန်း , Direct Pass လျှပ်စစ်သံလိုက် Pulse Valve
အသုံးပြုမှု - ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကရေနံလမ်းသို့မဟုတ် shock absorber back pressure oil လမ်းတွင်တပ်ဆင်လေ့ရှိပြီး၊ shift ကိုလျှော့ချ။ သော့ခတ်နိုင်ရန်အတွက်ဂီယာကိုအလိုအလျောက်မြှင့ ်၍ လျှော့ချသည့်အခါ၊ သို့မဟုတ်သော့ခတ်မှတ်နှင့်သော့ခတ်မှတ်တိုင်စတင်သောအခါ၊...
DMF-Z-70S ညာဘက်ထောင့် solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: DMF-Z-40 Pulse Valve , DMF-Z-50S Pulse Valve , DMF-Z-70S Right Angle Solenoid အဆို့ရှင်
အလုပ်လုပ်မှုနိယာမ solenoid အဆို့ရှင်၏ကွိုင်သည်ဝါယာကြိုးမှတဆင့် forward pulse signal သို့ input ဖြစ်ပြီး coil မှထုတ်လုပ်သော flux သည်ရွေ့လျားနေသော core ကို valve အတွင်းသို့ဆွဲယူရန်ဖွင့်သည်။ forward pulse signal ကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါရွေ့လျားနေသော core...
ညာဘက်ထောင့် solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: နစ်မြုပ် Pulse Valve , DMF-Z-20 Pulse Valve , DMF-Z-25 Pulse Valve
အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် Pulse solenoid အဆို့ရှင်ကိုလည်း diaphragm valve လို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းသည်ဖုန်အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများ၏ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်မှုတ်ပေးသောစနစ်အတွင်းရှိ compressed air ၏ "switch" ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Pulse...
နစ်မြုပ်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်စီးရီး
tag ကို: Pulse Solenoid Valve စီးရီး , Pulse Valve တိုက်ရိုက် Angle Dedusting , တိုက်ရိုက် Angle Dedusting Solenoid Valve
သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင် အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်း signal ကိုဝါယာကြိုးမှတဆင့် solenoid အဆို့ရှင်၏ကွိုင်ထဲသို့ input ကိုဖြစ်ပြီး, သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်သွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုတူရိယာ၏ output signal ကိုကထိန်းချုပ်ထားသည်။...
ခြောက်အုပ်စုခွဲသွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: DCF-4 Differential Valve , လက်မလျှပ်စစ်သံလိုက် Pulse Valve , တစ်လက်မနှင့်တစ်ဝက် Solenoid Valve
အဆိုပါ solenoid အဆို့ရှင်ကြီးမားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို electromagnetic pulse အဆို့ရှင်ဟုခေါ်နိုင်သည်။ သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တစ်ကြိမ်သာအဆို့ရှင်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။...
နစ်မြုပ်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: DMF-Z-40S လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် , DMF-Z-40 လျှပ်စစ်သံလိုက် Pulse Valve , DMF-Z-50S လျှပ်စစ်သံလိုက် Pulse Valve
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သော solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ညာဘက်ထောင့်လေစီးထိန်းချုပ်မှု solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
solenoid အဆို့ရှင်သည်စုပ်ယူသော 220V 24V တန်ဖိုးနည်းဖုန်မှုန့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သော့ခတ်ခွံမာသီးလေထု solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
1 လက်မ solenoid အဆို့ရှင် 220V ဆက်သွယ်ရေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ညာဘက်ထောင့် solenoid solenoid မြှေးအဆို့ရှင် 24V အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဟိုက်ဒရောလစ် solenoid အဆို့ရှင် 5V, DC အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DC က 24V pneumatic ပေါက်ကွဲမှု - ကာကွယ်နိုင်သောသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြှေးအမြှေးပါးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု DMF T က solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်သံလိုက် pneumatic solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်၏စံ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောဖိအား solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
solenoid အဆို့ရှင်စျေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DMF-Z-70S ညာဘက်ထောင့် solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ညာဘက်ထောင့် solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နစ်မြုပ်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်စီးရီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြောက်အုပ်စုခွဲသွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နစ်မြုပ်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve from China, Need to find cheap Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Pneumatic Hydraulic Solenoid Valve Pulse Valve, We'll reply you in fastest.